Gawaarida HGSli macquul ma ahan inay ku dhacdo ciqaabta | RayHaber | raillynews
HometareenkaHGSli awoodi kari waayaan
27 / 02 / 2013 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Maareeyaha Guud ee PTT Cusmaan Tural, 'Nidaamka Kala-guurka Degdegga ah (HGS) Haddii aad leedahay sumad halka aad aadeyso, haddii aad akhrineyso aaladda halkaas ama si kastaba sinaba looma dulqaadan karo dambiile sanayiye' ayuu yiri.
Tural wuxuu qabtay shir jaraa'id oo ku saabsan HGS, HGS'nin 1 illaa Febraayo KGS'nın oo lagu xasuusto aasaaskii, buundooyinka iyo jidadka waaweyn ee la aasaasay gelitaanka 166, bixitaanka 217, oo ay ku jiraan xafiiska sanduuqa 383 HGS, ayuu yidhi.
Calaamadaha HGS ee laamaha PTT, bangiyada qandaraaska la galay iyo saldhigyada saliida iyo ganacsatada Avea ayaa loo soo bandhigay iib, iyagoo sharraxaya Tural, 17 Sebtember 2012 la iibiyey tan iyo markii tirada 2 milyan la iibiyey, ayaa yidhi.
Tirada celceliska tirada baasaska maalinlaha ah ee leh sumadda HGS waxaa lagu muujiyey kun 250 Tural, boqolkiiba inta laga gudbayo HGS 35 ayaa sheegay in buundada.
Mid ahaan, nidaamku wuxuu si sax ah ugu lifaaqan yahay sumadda HGS ee gaariga, gaariga ma aha sumadda HGS sumadda gawaarida kuma dhejiso calaamada sumadda oo muujineysa kala-guurka iyada oo loo marayo nidaamka 3 sharxay.
Calaamadeynta saxda ah ee gawaarida gawaarida HGS ma aysan la kulmin wax dhibaato ah inta ay ka gudbayaan Tural, sheyga gaariga ee nidaamka, inkasta oo lacagta ku dhegan saxanka la inooga sheegay.
Xarkaha dhejiska ee HGS iyo xajmiga aan la aqrin karin ee kala-guurka gaadhiga waxaa lagu baarayaa sawirka gaariga oo qiimahiisu hoos ayuu uga dhacay sumadda HGS Astaanta Tural, 'HGS iyo OGS HGS HGS HADAHA, xagga fiberka, fiberku meesha kuma jiro. OGS'de wuxuu qaadaa macluumaadka aaladda 'ayuu yiri.
Farqi kale oo u dhexeeya KGS iyo HGS ayaa ah in HGS ay la xiriirto taargada iyo taargada ruqsada, Tural wuxuu sheegay in muwaadiniinta qaar ay sumadda isku mid ah ugu isticmaalaan gawaarida kala duwan iyo in sumadda adeegsiga astaanta ku habboon aysan wax dhibaato ah keenaynin.
Mid ahaan, calaamadda loo istcimaalo fasalka gaariga ayaa ka duwan heerka fasalka gaariga gudahiisa maalinta 7 haddii sumadda lagu dabaqi doono ciqaabta, ayuu yiri.
Haddii ay dhacdo fashilka nidaamka inuu baabi'iyo dhibaatooyinka sii wadi doona inuu ka shaqeeyo sameynta nidaamka kamaradaha labaad oo u sheegaya toliska Tural, waxay qaadan doontaa ku dhawaad ​​bilooyin 7 oo shaqo ah dhamaadka dhamaadka lacagaha ayaa laga saari doonaa, ayuu yiri.
Nidaam ahaan, 'Nidaamka Degdegga Degdegga ah' Suuragal ma ahan in lagu dhaco ciqaab kasta oo gaadiid kasta oo diiwaangashan. Haddii aad leedahay sumadda HGS, sida loo tago halkaad aado, ma jirto jid aad aqrin karto ama looma marin karo ciqaab dembi si kasta oo ay tahay ayuu yidhi.
Kala beddelka Doolarka ilaa TL lagama yaabo in laga helo Tareenka Eurasia ee leh YSS iyo Bridal Osmangazi
Waddada Waddada Wabiga Bahcesaray 4 Xiritaan Ka Dib Dhibaatada Ka Dib
Dib u dhigista ganaaxa la siiyay kuwa gubay Haydarpaşa Tareenka
Booliska Kobanheegan ayaa lagu soo oogay in ay darawaliintu ku xadgudbeen
Gawaarida Park Eden ayaa joojiyay tareenka, isla markiiba toddoba
Saraakiisha shirkadda oo hirgelin doona mashruuca Trolleybus ee Kütahyada